ज्योति लाईफको कारोबार सुरु, शेयरमा उच्च माग - नेपालबहस
ज्योति लाईफको कारोबार सुरु, शेयरमा उच्च माग
| १२:३५:३७ मा प्रकाशित
२५ चैत, काठमाडौं । नेप्सेमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार सुरु भएको छ । कम्पनीले मंगलबार नेप्सेमा २ करोड २० लाख कित्ता आईपीओ सूचीकृत भएको हो ।
सूचीकृत भएसँगै कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा आज बुधबारदेखि कारोबारमा सुरु भएको हो । पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले ३६० ओपन रेञ्ज तोकेको छ ।
यो समाचार तयार पर्दा १२ बजेको अवधिमा कम्पनीको कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर २१ रुपैयाँले बढेर ३८१ रुपैयाँ पुगेको छ । यो दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ । यस अवधिमा कम्पनीको शेयरमा साढे २१ लाख कित्ता शेयरमा खरिद माग आएको छ ।
कम्पनीले फागुन २१ गतेदेखि २६ गते ६६ लाख कित्ता आईपीअ‍ो निष्कासन गरेको थियो । जसमध्ये ५९ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि, ३ लाख ३० हजार कित्ता कर्मचारीको लागि र ३ लाख ३० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको थियो ।
कम्पनीको आईपीअ‍ोमा १८ लाख ४२ हजार ४८० जनाको आवेदन परेको थियो । जसमयध्ये ४४ हजार ६४५ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । ५ लाख ९४ हजार जना आवेदकले १० कित्ता दरले शेयर पाएका थिए ।
दुई वाणिज्य बैंकसहित दश कम्पनीको ४० लाख कित्ता शेयर खरिद माग, कुनको कति ? २ दिन पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव भर्खरै
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु ९ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग ११ मिनेट पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण १३ मिनेट पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? १४ मिनेट पहिले
नेप्सेमा रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन २० मिनेट पहिले
एक सातामा १२४ प्रजातिका चरा भेटिए २३ घण्टा पहिले
भजनीका जयबहादुर बुढा पत्रकारितासँगै कृषिकर्ममा ५ दिन पहिले
कैलालीमा ‘इन्टरलक’ इँटाको प्रयोग बढ्दै ३ हप्ता पहिले
नबिल बैंकले ल्यायो ७५ प्रतिशतसम्म विशेष छुटको योजना १ हप्ता पहिले
सञ्चार सेवामा जोडिए तीन दुर्गम गाउँपालिका ४ हप्ता पहिले
यमनको माारिब प्रान्तमा भएको भिडन्तमा ४७ जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
खनाल-नेपालको बेग्लै सर्कुलर २ हप्ता पहिले
गुल्मीमा किसानलाई भैंसी वितरण र भैंसीको बीमा ! १ दिन पहिले
भारतबाट अत्यावश्यक औषधि ल्याउन समस्या १२ महिना पहिले
होमियोपेथिकमा बिरामीको आकर्षण ३ महिना पहिले
काला-कोला टिकटक क्विन प्रतियोगिता सम्पन्न ९ महिना पहिले